Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.4.1 eBird
eBird dia manangona angona momba ny vorona avy amin'ny vorona; Ireo mpirotsaka an-tsitrapo dia afaka manome ny lanjany fa tsy misy ekipa fikarohana afaka mifanaraka.
Avoary eny rehetra eny ny vorona, ary te hahita ny toerana misy ny vorona rehetra amin'ny fotoana rehetra ny ornithologists. Noho ny fandaharam-potoana tena tsara, ny ornithologists dia afaka mamaly fanontaniana maro ao amin'ny saha. Mazava ho azy, ny fanangonana ireo tahirin-kevitra ireo dia mihoatra lavitra noho ny mpikaroka iray. Mandritra izany fotoana izany, ny mpandinika ny ornithologists dia maniry kokoa ny tahirin-tsarimihetsika sy feno kokoa, ny "vorona" -ny olona mijery vorona mijery fialamboly-mandinika ireo vorona sy mitantara ny zavatra hitany. Ireo vondrom-piarahamonina roa ireo dia manana fiaraha-miasa maharitra ela, saingy ankehitriny dia niova ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny dizitaly. eBird dia tetikasa fanangonana tahirin-kevitra izay manangona vaovao avy amin'ireo vorona manerantany, ary efa nahazo mpitsidika 25 tapitrisa mahery avy amin'ny mpandray anjara 250.000 (Kelling, Fink, et al. 2015) .
Talohan'ny fanombohan'ny eBird, ny ankamaroan'ny angon-drakotry ny vorona dia tsy azon'ny mpikaroka alaina:
"An-tsokosoko an'arivony manerana izao tontolo izao dia mitoetra tsy misy antontam-baovao, karatra endritsoratra, rakitsoratra voamarina ary diary. Ireo izay tafiditra amin'ny rafitra fiarovan'ny vorona dia mahafantatra tsara ny fahasorenan'ny fandrenesana indray ny momba ny 'raketin'ny vorona tato anatiko' [sic] Fantatsika ny maha-sarobidy azy ireo. Mampalahelo fa fantatsika koa fa tsy afaka mampiasa azy ireny isika. " (Fitzpatrick et al. 2002)
Raha tokony hoe manana tahirin-kevitra sarobidy ry zareo dia tsy ampiasaina, ny eBird dia ahafahan'ny mpifanolo-bodirindrina hampakatra azy ireo any amin'ny lahatahiry nomerika fototra. Ny data navoaka tao amin'ny eBird dia ahitana saha fototra enina: iza, aiza, rahoviana, inona karazana, firy, ary ezaka. Ho an'ireo mpamaky tsy vorona, ny "ezaka" dia manondro ny fomba ampiasaina rehefa manao fanamarihana. Ny fanamarinana kalitao momba ny kalitao dia manomboka mialoha ny hampiakarana ireo angona. Ny mpirenireny manandrana manolotra tatitra tsy mahazatra - toy ny tatitra momba ireo karazana tsy fahita firy, na tarehimarika tena avo lenta, na tatitra tsy misy hatak'andro-dia voamarika, ary mandefa antsipiriany fanampiny ny tranonkala, toy ny sary. Rehefa avy nanangona ity fampahalalana fanampiny ity, dia alefaso any amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana manokana an-tsitrapo an-jatony ireo tatitra an-jorom-bala mba hijery bebe kokoa. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny manam-pahaizana manokana - anisan'izany ny fifanarahana fanampiny amin'ny mpitaingin-tsoavaly, dia nahemotra ho toy ny tsy azo itokisana ny tatitra voarakitra an-tsoratra na miditra ao amin'ny daty eBird (Kelling et al. 2012) . Io fandraketana fandrakofam-peo io dia natolotra ho an'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny fifandraisana aterineto, ary hatramin'izao, efa ho 100 ny mpamoaka boky voamarina dia nampiasa izany (Bonney et al. 2014) . eBird dia maneho mazava fa ny vorona mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka manangona angona izay ilaina amin'ny fikarohana momba ny ornithologie.
Iray amin'ireo hatsaran'ny eBird dia ny fisamborana ny "asa" izay efa nitranga - amin'ity tranga ity, ny vorona. Io endri-javatra io dia ahafahan'ilay tetikasa hahatratra dingana goavana. Na dia izany aza, ny "asa" ataon'ireo vorona dia tsy mifanaraka tanteraka amin'ny tahiry nilain'ireo ornithologists. Ohatra, amin'ny eBird, ny fanangonana angon-drakitra dia mamaritra ny toerana misy ny vorona, fa tsy ny toerana misy ny vorona. Midika izany fa, ohatra, ny ankamaroan'ny fanamarihana dia mitranga eo akaikin'ny làlana (Kelling et al. 2012; Kelling, Fink, et al. 2015) . Ankoatra ny fizarana ny ezaka atao amin'ny habakabaka, dia tsy tsara foana ny fandinihana ataon'ny vorona. Ohatra, ny sasany amin'ireo vorona ireo dia mampakatra fampahalalana momba ny karazan-javamaniry izay heveriny fa mahaliana, fa tsy fampahalalana momba ny karazana rehetra hitany.
Ireo mpikaroka eBird dia manana vahaolana roa lehibe ho an'ireo olana momba ny kalitao-vahaolana izay mety hanampy amin'ny tetikasa fanangonana tahiry hafa. Voalohany, miezaka ny hanatsara ny kalitaon'ny angonin'ny vorona ny mpikaroka eBird. Ohatra, ny eBird dia manolotra fanabeazana ho an'ny mpandray anjara, ary namorona ny fampisehoana ny angon-drakitra isaky ny mpandray anjara izy ireo izay, araka ny tanjon'izy ireo, hamporisika ny vorona hampakatra ny vaovao momba ny karazana rehetra hitany, fa tsy ny mahaliana indrindra (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) . Faharoa, ireo mpikaroka eBird dia mampiasa modely statistika izay manandrana manitsy amin'ny latsa-dranomamy sy ny heterogène momba ny angon-draketrana (Fink et al. 2010; Hurlbert and Liang 2012) . Mbola tsy mazava tsara izao raha manaisotra tanteraka ny fizotry ny angon-drakitra ireo modely statistik ireo, fa ny ornithologists kosa dia matoky tanteraka ny kalitaon'ny angon-drakitra eBrid izay, araka ny voalaza terỳ aloha, ireo tahiry ireo dia nampiasaina tao anatin'ireo lahatsoratra efa voamarina momba ny siantifika efa ho 100.
Maro amin'ireo tsy-ornithologista no tsy dia saro-tahotra voalohany rehefa maheno momba ny eBird sambany. Raha ny hevitro, ny ampahany amin'io fisalasalana io dia avy amin'ny fisainana momba eBird amin'ny fomba diso. Olona maro no mieritreritra voalohany hoe "Marina ve ny angona eBird?" Ary ny valiny dia "tsy misy." Kanefa, tsy izany ny fanontaniana mety. Ny fanontaniana mety dia hoe "Ho an'ny fanontaniana sasantsasany momba ny fikarohana, tsara kokoa ve ny momba ny eBird noho ny antontan'isa momba ny ornithologie?" Ho an'io fanontaniana io dia "eny marina tokoa" ny valiny, amin'ny ampahany noho ny fanontaniana maro mahaliana - toy ny fanontaniana momba ny fifindra-monina - Tsy misy hafainganam-pahaizana ara-drariny ny fanangonana tahirin-kevitra.
Ny tetikasan'ny eBird dia mampiseho fa azo atao ny mandray anjara amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny fanangonana ireo angona siantifika manan-danja. Na izany aza, ny eBird, sy tetikasa mifandraika amin'izany, dia manondro fa ny fanamby mifandraika amin'ny famolavolana sy ny kalitao momba ny angon-drakitra dia olana momba ny tetikasa fanangonana tahiry. Araka ny ho hitantsika ao amin'ny fizarana manaraka, na izany aza, miaraka amin'ny famolavolan-kevitra sy teknolojia malemy, ireo olana ireo dia azo zakaina amin'ny toe-javatra sasany.